Sabiha Gökçen Subway Airport waxaa la geyn doonaa 2020 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSabiha Gökçen Subway Airport waxaa la geyn doonaa 2020
Sabiha Gökçen Subway Airport waxaa la geyn doonaa 2020
11 / 12 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
sabiha gokcen metro wuxuu joogi doonaa adeega
Sabiha Gökçen Subway Airport waxay ku jiri doontaa Adeeg 2020; Ersel Göral, Maamulaha Guud ee Duullimaadka Diyaaraddaha ee Istanbul Sabiha Gökçen OHS, wuxuu caddeeyay in aasaaska dhismaha wadad-weynaha socda in la dejin doono rubuc-billaha hore ee 2020, in loo isticmaali doono qeybta labaad ee 2021 iyo in dhismaha mitrooga la adeegsan doono dhamaadka 2020.
Ersel Göral wuxuu cadeeyay in dhismaha garoonka diyaaradaha ee Istanbul Sabiha Gökçen Airport uu furi doono dhamaadka 2020. Xaqiiqdii, hadafku wuxuu ahaa in la dhammaystiro sannadkan. Si kastaba ha noqotee, dib u dhac ku dhawaad ​​hal sano ayaa la saadaalinayaa. Waxaan rajeynayaa in khadka tareenka dhulka la geli doono dhamaadka 2020. Markaa, rakaabkeenna imanaya Sabiha Gökçen Airport ama ka safraya Sabiha Gökçen Airport waxay awoodi doonaan inay gaaraan Kadıköy qiyaastii 40 daqiiqo iyo Taksim qiyaastii 50 daqiiqo.
Qaybta ordaha cusub ayaa noqon doonta 3. Si kale haddii loo dhigo, degidda iyo ka-qaadashada ayaa lagu bixin karaa xaalad kasta oo cimilo-maalmeed kasta. Mid ka mid ah waxyaabihii muhiimka ahaa ee dhismaheena waddooyinka, dhismayaasha hoostiisa, ayaa dhammaaday. Hadda hawshii buuxintu way bilaabmaysaa. Dhameystirka ka dib dhammaystirka, shaqooyinka superstructure, qalabka duulista, qalabka nalalka la dhammeeyo, haddii uu jiro khalad dhamaadka dhamaadka sanadka labaad ee 2020 waxaa la gelin doonaa adeegga. Wadadkeenna hadda jira, ee aan hadda isticmaalno, wuxuu geli doonaa dayactir marka wadad-weynaha labaad uu furo. Laakiin 3 ma geli doono dayactirka bisha sidii loo qorsheeyay laga bilaabo 6 sano ka hor. Xiritaanka 1,5-2 bishii waa la saadaaliyay inta badan. Tani waa sababta oo ah maamulka garoonka diyaaradaha ee HEAS wuxuu sii wadaa dayactirka habeenkii oo dhan. Waxay ku dayactiraan wadada la maro waddo aad u sareysa, warshado aad u wanaagsan iyo qalab aad ugu habboon. Marka marka wadad-orda labaad uu dhammaado, xiritaanka bisha "1,5-2" ayaa nagu filnaan doonta si aan u ilaalinno dariiqa jira.
Garoonka Diyaaradaha ee Gaziantep waxaa lagu bilaabi doonaa 2020
Ankara Niigde Highway waxaa loo adeegi doonaa 2020
Tareenka Shiinaha ee Maglev wuxuu gaaraa xawaaraha 1000 Km saacaddiiba si loo bilaabo 2020
Garoonka diyaaradaha ee Istanbul-Gayrettepe oo laga furayo 2019
Tareenka jamacadda ayaa la gelin doonaa adeeg kadib markii tijaabooyinku socdaan
Tareenka xajmiga ayaa la bilaabi doonaa waqti dhow
Magaaladda Karte-Kaynarca waxaa lagu qaban doonaa adeegga 2019
Tareenka Keçiören waxaa la bilaabi doonaa wareegga sadexaad ee 2016
Madaarka Kadikoy Kartal waxaa la bilaabi doonaa Febraayo 2012!
Konya Metro 4 waa la dhammeystiri doonaa oo la gelin doonaa adeegga inta sanadka lagu jiro
Sabiha Gökçen madaarka-Viaport ayaa tagay hindise
Kayseri High Speed ​​Line ayaa lagu furfuri doonaa 2020
Madaarka Sabiha Gokcen
Subway ilaa Sabiha Gökçen Airport
Ku soo dhowow Gaarka ah Diyaaradda Qatar Airways ee '1 Millionaire Rakaab' oo ku taal Sabiha Gökçen